कान दुख्यो ? औषधी हैन, प्याजको यसरी प्रयोग गर्नाले ठिक हुन्छ!
के तपाईको कान दुख्यो ? अस्पताल जाँदा र आधुनिक औषधी खाँदा खाँदै पनि सञ्चो नभएर पिडित हुनु हुन्छ भने यो जानकारी तपाइको लागि हो ।
तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ तपाई हाम्रो भान्सामा सधै पाइेन तरकारी प्याजको प्रयोग कान दुखाइको अचुक औषधी हो । कान सुन्निने, चिलाउनै र संक्रमण भएको अवस्थमा प्याज प्रयोग गरेर उपचार गर्न सकिन्छ। यसको कुनै साइड ईफेक्ट पनि छैन् ।
यसका लागी सवै भन्दा पहिले प्याँजको रस निकाल्ने, रसलाई रुईमा चोपेर कानमा थोपा थोपा गरे चुहाउने, प्याजको रस कान भित्र छिरे नछिरेको भने विचार पुर्याउनु पर्छ ।
प्याजको रसले कान भित्र छिरेर विभिन्न किसिमका संक्रमणपनि ठिक पार्छ । यस बाहेका पनि प्याज ब्लड सुगर, इंफेक्सन, मुटुका लागि उपयोगि मानिन्छ भने शरिरको रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ।
पहिलो समाचारतौल घटाउने सारै सरल उपाय अर्को समाचारप्रचण्डको भयानक खुलासा गर्ने भिडियो बन्यो भाइरल ।
रक्तदानसम्बन्धी अनौठो तथ्य ,जुनधेरै खोइ लाई थाहा छैन होला